လဈြလြူရှုခွငျးဆိုတာ အတတျပညာတဈခုပါပဲ – Shinyoon
လဈြလြူရှုခွငျးဆိုတာ အတတျပညာတဈခုပါပဲ ကြောငျးစာတှေ စာအုပျတှေ အထဲကလို သငျရိုးညှနျးတမျးတှေ မပါပမေယျ့ တတျမွောကျခငျြတဲ့ လူတိုငျးမှာ . . . နာတတျတဲ့ စိတျနဲ့ နောငျကဉျြလောကျတဲ့ ဒဏျရာ ဒဏျခကျြတှေ လိုပါတယျ ။
လဈြလြူရှုပါ ဆိုတာ . . . မတ်ေတာတှေ ဆကျမထားဖို့ အရာရာကို မကျြနှာလှဲပဈလိုကျဖို့ တဈကိုယျကောငျးဆနျဖို့ မွှောကျထိုးပငျ့ကျောတှေ လုပျနတောမြိုးမဟုတျဘူး ။ ကိုယျ့စိတျ ကိုယျ့ဆန်ဒတဈခုတညျးနဲ့ အရာရာကို ရငျဘတျကွီးနဲ့ ရငျးပွီး ဖွဈသမြှ ပကျြသမြှ အလုံးစုံကို ခေါငျးထဲ ပွှတျသိတျထညျ့ထားတဲ့အခါ ကိုယျပဲ ပငျပနျးရတတျတယျလေ ။
အရငျကလို သူ့စိတျနဲ့ကိုယျ့ကိုယျ မရှငျမပြ နထေိုငျနရေခွငျးတှေ မဟုတျတော့ပဲ ကိုယျ့စိတျနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျ တဖွေးဖွေး ပြျောအောငျ နတေတျလာပါလိမျ့မယျ ။ နရောတကာမှာ လူတိုငျးကို စတေနာတှေ မတ်ေတာတှခေညျြး ထားလို့မရဘူး ။ ဘုရားဟောတရားကို ဆနျ့ကငျြရာ ရောကျပမေယျ့ လကျရှိဖွဈပကျြနတေဲ့ အရာတှေ အားလုံးကို ခွုံငုံကွညျ့ရငျ လဈြလြူရှုသငျ့တနျ လဈြလြူရှုတတျဖို့လဲ လိုတယျလေ ။ ကိုယျနာကငျြတဲ့အခါ ကိုယျစာနာသလို ဘယျသူက ပွနျပွီး ငဲ့ညှာလိမျ့မှာ မဟုတျဘူး ။ ကိုယျနာကငျြရတဲ့အခါ ကိုယျညံ့လို့ ကိုယျခံရတာပဲဆိုတဲ့စိတျနဲ့ပဲ တဈယောကျတညျး ဖွသေိမျ့ရတာပဲ မြားပါ ။ ဆကျပွီး မနာကငျြခငျြတော့တဲ့အခါ သညျးခဲနိုငျတဲ့အတိုငျးအတာတှေ ကြျောသှားတဲ့အခါ လဈြလြူရှုခွငျးအတတျပညာကို ကောငျးကောငျးကွီး နားလညျသဘောပေါကျသှားလိမျ့မယျ ။
လျစ်လျူရှုခြင်းဆိုတာ အတတ်ပညာတစ်ခုပါပဲ ကျောင်းစာတွေ စာအုပ်တွေ အထဲကလို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ မပါပေမယ့် တတ်မြောက်ချင်တဲ့ လူတိုင်းမှာ . . . နာတတ်တဲ့ စိတ်နဲ့ နောင်ကျဉ်လောက်တဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေ လိုပါတယ် ။
အမှတ်မရှိရင် ဘယ်လောက် ဒဏ်ရာများများ မူလအတိုင်းပဲ ဖြစ်လာမှာလေ ။ ဒီဒဏ်ရာက ဒီဒဏ်ရာပါပဲ ထပ်ပြီး တိုးလာမယ့် အနာတွေပဲ ရှိလာလိမ့်မယ် ။ ပြီးတော့ . . . လုံလောက်တဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်ဆိုတာ မေတ္တာတွေ သိပ်ကိုကြီးမားနေတဲ့အခါ နာကျင်နေလဲ နာရကောင်းမှန်းမသိ ဖြစ်နေတတ်တယ် ။
လျစ်လျူရှုပါ ဆိုတာ . . . မေတ္တာတွေ ဆက်မထားဖို့ အရာရာကို မျက်နှာလွဲပစ်လိုက်ဖို့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဖို့ မြှောက်ထိုးပင့်​ကော်တွေ လုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ။ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ့်ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ အရာရာကို ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ရင်းပြီး ဖြစ်သမျှ ပျက်သမျှ အလုံးစုံကို ခေါင်းထဲ ပြွတ်သိတ်ထည့်ထားတဲ့အခါ ကိုယ်ပဲ ပင်ပန်းရတတ်တယ်လေ ။
ကိုယ့်ဖက်ကချည်း တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအတွက် တစ်ဖက်မဟုတ် တစ်ဖက်တော့သေပေးရတတ်တယ်လေ လူမသေပေမယ့် မျှော်လင့်ချက်တွေ အိပ်မက်တွေ သေပေးလိုက်ရတာတွေပေါ့ ။ စေတနာတွေထားပေမယ့် ဝေဒနာကြီးပဲ ပြန်ရလာတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ကြာကြာ နာနာကျင်ကျင်နဲ့ ဆက်ပြီး နေနိုင်မှာလဲ ။ သည်းခံမှုတွေ ရဲ့အဆုံးမှာ လျစ်လျူရှုမှုတွေ ရှိတယ် ။
ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လို လျစ်လျူရှုပစ်ရမယ်ဆိုတာ သင်ပြပေးလို့ မရဘူး ။ ကိုယ် ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ် ။ လျစ်လျူရှုခြင်း အတတ်ပညာတတ်မြောက်သွားတဲ့အခါ အရင်ကထက် နေရတာ ပိုပြီး ပေါ့ပါးလာလိမ့်မယ် လိုအပ်တဲ့လူ နဲ့ မလိုအပ်တဲ့သူ ပိုပြီး ခွဲခြားတတ်လာလိမ့်မယ် ။
အရင်ကလို သူ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ် မရွှင်မပျ နေထိုင်နေရခြင်းတွေ မဟုတ်တော့ပဲ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် တဖြေးဖြေး ပျော်အောင် နေတတ်လာပါလိမ့်မယ် ။ နေရာတကာမှာ လူတိုင်းကို စေတနာတွေ မေတ္တာတွေချည်း ထားလို့မရဘူး ။ ဘုရားဟောတရားကို ဆန့်ကျင်ရာ ရောက်ပေမယ့် လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အရာတွေ အားလုံးကို ခြုံငုံကြည့်ရင် လျစ်လျူရှုသင့်တန် လျစ်လျူရှုတတ်ဖို့လဲ လိုတယ်လေ ။ ကိုယ်နာကျင်တဲ့အခါ ကိုယ်စာနာသလို ဘယ်သူက ပြန်ပြီး ငဲ့ညှာလိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ကိုယ်နာကျင်ရတဲ့အခါ ကိုယ်ညံ့လို့ ကိုယ်ခံရတာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ တစ်ယောက်တည်း ဖြေသိမ့်ရတာပဲ များပါ ။ ဆက်ပြီး မနာကျင်ချင်တော့တဲ့အခါ သည်းခဲနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေ ကျော်သွားတဲ့အခါ လျစ်လျူရှုခြင်းအတတ်ပညာကို ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ် ။